Izindlela zokukhula kwabafundi ukuthi ngabe abafundi bahlose yini ukuba nekhono, noma balondoloze ubungcweti, kwamazinga ezifundo zesiNgisi / zoLimi neMathematics kungakapheli iminyaka emine. Amaphesenti wokuKhula kwabafundi (i-SGPs) asetshenziselwa ukuthola ukuthi ngabe abafundi bakhula ngokwanele yini ngonyaka ukuze bahlangabezane nalezi zinhloso. Ama-SGPs achaza ukufunda komfundi uma kuqhathaniswa nabanye abafundi ababelana ngomlando wokusebenza ofanayo nowomfundi, noma &#39;ontanga abafundile&#39; bomfundi. Bafundi kuphela abanemiphumela emibili yokulandelana yokulandelana asebenzisa iningi lonyaka wesikole ababhalise kulesi sikole abafakiwe lapho bebika ukukhula kwabafundi. (Umthombo wedatha: unyaka wesikole ka-2018-2019)
Amaphesenti amangaki abafundi kulesi sikole ahlangane noma adlula inani labo lokukhula minyaka yonke?
Izindlela zokukhula kwabafundi noma ngabe abafundi bahlosile ekutheni babe nobungcweti noma balondoloze ubungako bamazinga we-English / uLimi lwezobuciko kanye nezibalo.
Ubuciko besiNgisi / Ulimi
Isilinganiso Sombuso 62.4%
Ubuciko besiNgisi / Ulimi Ibanga le-10
Ukwenza Okuphansi Kakhulu 25% wabafundi Ibanga 3-8
Isilinganiso Sombuso 33.6%
Ubuciko besiNgisi / Ulimi Ukwenza Okuphansi Kakhulu 25% wabafundi Ibanga 3-8
Isilinganiso Sombuso 35.7%
Izibalo Ibanga le-10
Ukwenza Okuphansi Kakhulu 25% wabafundi babafundi amaGrade 3-8
Isilinganiso Sombuso 17.1%
Izibalo Ukwenza Okuphansi Kakhulu 25% wabafundi babafundi amaGrade 3-8
Ngabe abafundi basebenza kanjani uma kuqhathaniswa nezinhloso zesikhashana zesifundazwe zokukhula komnotho?
Okuhlosiwe kwesikhashana kukhombisa inqubekelaphambili elindelekile edingekayo ukufeza izinhloso zesikhathi eside zikazwelonke zokukhula komnotho.
Uyini umthamo wokukhula kwabafundi kulesi sikole?
Amaphesenti Okukhula Kwabafundi amelela inani lokuthuthuka kwabafundi okwenziwe ngonyaka owawuqhathaniswa nabanye abafundi abanomlando ofanayo wokuphumelela kwezemfundo.
IsiNgisi / Ulimi lwezobuCiko lwePhakathi lokukhula kwePententile yamaBanga ama-3-8
IsiNgisi / Ulimi lwezobuCiko lweSayensi yokuKhula kweMinyaka ephakathi IBanga le-10
Mathematics Median Growth Percentile Amabanga 3 - 8
I-Mathematics Median Growth Percentile Ibanga le-10